Ilay Tranga Hafahafa Nahazo an-dRabeza — Tsara Soratra
Ilay Tranga Hafahafa Nahazo an-dRabeza
Alahady harivariva sendra nandrahona kanefa nahatsaratsara vahiny …Nipetrapetraka teo an-davarangana ambonin’ilay trano gasy fonenany teny Ampasanisadoda Ramose Rabeza sy Madame Violette vadiny. Ramose moa nisotro Coca Light, Ramatoa kosa namango Baileys. Io no ‘happy hour' fanaon'izy mivady isaky ny faran'ny herinandro.
“Tena nanambina antsika kosa iny taona vao nierina iny Ramatoa an! Nanao tombombarotra kelikely tsaratsara ny magazaintsika ka afaka naloa tanteraka ny trosantsika rehetra tany amin’ny banky. Tsy ananan’izan’iza vola intsony isika na dia venty sy kirobo aza. Tsy izany ihany fa mbola nisy tombony kely tavela koa azontsika ampiasaina.”
“Tena marina ve? Tsara be izany!” Nitehatehaka toy ireny ankizy kely nahazo fanomezana ireny Madame Violette, vehivavy tsara tarehy sady mbola mitana tsara na dia efa mananika ny dimapolo taonany aza. “Marina mihitsy ilay teneninao hoe tsy voatery hametsy na hamitaka olona foana akory vao afaka mioty fahombiazana eo amin’ny lafiny fandraharahana! Andao mihitsy isika Rabeza mba hifandom-bera sady hankasitraka izao fahasoavana azontsika izao a!” Sady nasandrany ny verany nisy Baileys.
Dia nampiakatra ny verany misy Coca light koa Rabeza. “Ho antsika anie ny fahombiazana!” hoy Rabeza sady nodominy kely tamin’ny verany ilay veran-dRaviolety. Dia samy nisotro ny azy. Mba te haka jinjany kely tamin’ilay Baileys Rabeza fa tsy avelan’ny dokotera noho ny diabetany. “Mandry tsara mihitsy ny saiko izao satria tao anaty fahamarinana tanteraka fa tsy nisy halatra na kaomberaka no nahazahoako an’io tombony kely io e!”
“Ka inona no eritreretinao hanaovana azy io? Sao dia mba tokony hanaovana fety be na hitondrana ny ankizy haka rivotra any La Reunion na Maurice?” Ohatry ny efa hitan-dRaviolety sahady izy efa-mianaka mitsangatsangana sy manao shopping dia avy eo mifalihavanja manodidina an’izao Saint Denis firesaky ny olona aminy izao. Efa ela izy no mba naniry hivoaka kely an’i Madagasikara. Mba tiany hahita zavatra hafa sy hiaina rivotra vaovao koa izy mianadahy zanany.
“An an an!” Nitsiky sady salanitra Rabeza nijery ny mason’ny vadiny nanjelatry ny hafaliana sady nandray ilay tanana dongadonga sy malandilandin’ny Nivea sy ny mena-dravina manimpofona tsy fantatra anarana. “Mbola tsy tena fotoanany angamba aloha izao Rafotsy an! Raha ny hevitro dia tokony haverina hahodina ao anatin’ny orinasa, hanamafisana orina ny rafitra misy, ny vola tavela. Andao hividianana fitaovana hahamora ny fitanterana ny entam-barotra avy any amin’ny fivarotana ambongadiny ohatra. Sa ahoana hoy ianao?”
“Ny anao no marina rangahy an!” Na dia mba nandrevirevy fialantsasatra tena tsy mba takany hatramin’izay aza i Madame Violette dia nekeny ny fahendren’ny vadiny. Efa mihaotra kelin’ny roa-polo taona izy roa no nivady, kanefa tena mbola tsy lefy ny fitia ary mbola nahay nifanaja sy nifanaraka tsara rizareo.
“Aleo isika hijerijery ireny fiara mba lehibehibe azo hitanterana entana ireny. Mahabe masonkarena fotsiny ilay manofa ny sipergoletin’i Totozandry isak’izay mihetsika.” Efa nitilitily tolom-barotra vitsivitsy tany anaty gazety ihany Rabeza, ary nisy 404 baché tsy dia lafo loatra izay, noheveriny fa mety hifanaraka tamin’ny zavatra ilain’ny Epicerie Vatsisoa. “Aza mbola tenenina anazy mianadahy aloha raha tsy efa azo antoka fa azo ny fiara, sao diso fanantenana eo izy raha misy sampona.”
Tamin’io fotoana io, tsy hitan’izy nivady akory fa nisy tovovavy dongadonga iray nibitabitaka falifaly tao ambany lavarangana rehefa avy nihaino ny resaka nifanaovan’ny ray aman-dreniny.
Alatsinainy maraina tao amin’ny Lisea JJ Rabearivelo … Efa tamin’ny valo maraina, ora fidiran’ny mpianatra i Angele vavimatoa an-dRabeza no nangidihidy te hitantara mafy ilay vaovao goavana tamin’i Bodokely, ilay ‘best friend for ever (BFF)’-ny hatramin’izay nisian’ny tany sy ny lanitra ka ho mandrakizay doria … amen. Tamin’ilay atsasan-kadiny fialan-tsasatry ny mpianatra tamin’ny folo sy sasany vao nifanena ka afaka niresaka teo an-tokontanim-pianarana izy mirahavavy.
“Tenenoko zavatra indry fa tazomy ho an-dry irery an!” hoy i Angele teo am-pilaharana ny mofo sakay sy mofo akondron’i Jean Noel, ilay mpivaro-mandeha malaza amin’ny hai-fy nivarotra tsakitsaky tery atsimo andrefan’ny vavahadin’ny sekoly.
“Iza ary no hitantarako azy eo fa indry koa?” Namaly mody tsy rototra i Bodokely na dia liana dia liana ny hahafantatra tokoa aza. Nidobodoboka ery ny fony ary nibitabitaka tsisy ohatr’izay ilay sarakatiny havanana niandry ilay hafatra tsiambarantelo (sic) ho zarain’ilay BFF-ny aminy.
“Tandremo ary ho’a sao dia aparitaka,” hoy i Angele nanamafy sy nanantitranitra. Nanongilantsofina tsy nisy ohatr’izany i Bodokely. “Mety hividy fiarakodia akia izahay atsy ho atsy an!!”
“Marina hoe!” Hoy i Bodokely nihoraka sady mody nikapoka ny tanan’i Angele. Somary diso fanantenana kely ihany anefa izy. Ireny fosafosa miresaka olon-kafa na fosafosa miditra amin’ny antsipirihan’ny fiainan’ny olona ireny no nantenainy. Toa resaka tsotsotra tsy dia tena misy mampiavaka azy anefa no notantarain’ilay sakaizavaviny — sady tsy manaratsy olona no tsy milaza zavatra mety manafitohina — ‘boring’ hoy izy anakam-po. Kanefa moa ny BFF-ny no noresahiny ka dia mba mody nanao taitaitra koa izy. “Wow! Sao aloha indry dia mananihany anahy fotsiny e?”
“Tena marina ka.” Gaga ihany i Angele fa ohatry ny tsy nino azy ilay sakaiza tiany sady tia anazy. “Henoko ny Dadanay sy ny Mamanay niresaka omaly. Nilaza i Dada fa nanao tombom-barotra betsaka hono ny epicerie an’i Dada tamin’ity taona ity. Dia avy i Dada niteny hoe hividianana fiara lehibe izany vola izany.”
“Tena sambatra be akia ianareo an!” hoy i Bodokely, noravahan’ny tsiky marevaka ilay tarehiny zarazara pentesin’ny monin’adolatsento vao miala sakany iny. Tsiky ivelany ihany anefa fa ny tao anatiny kosa dia novesaran’ny lonilony sy ny fialonana an’ilay BFF-ny. Izy koa mantsy efa elaela ihany no mba naniry hanana fiara 4x 4, kanefa toa tsy mba anisan’ny zavatra mety ho takatry ny ray aman-dreniny mihitsy angamba izany fiara izany amin’izao fotoana izao.
Talata maraina teny amin’ny Route Circulaire … Nanorana sy maizimaizina ny andro tamin’io. Tafiaraka nipetraka teo amin’ny toerana mahazatra azy tao anatin’ilay Sprinter-n’ny zotra 116 avy any Mandroseza Ingahy Rajao sy Ramose Rakotobe rain’i Bodokely. Mpifanolobodirindrina ry zareo sady mifanakaiky toeram-pisana ka matetika tafiaraka rehefa mandeha miasa.
“Efa renao moa fa hividy fiara hono ry Rabeza?” hoy Rakotobe raha nadalo teo alohan’ny Epicerie Vatsisoa tery Ampasanisadoda ny taxibe. Tsaroany tampoka ny resaka nifanaovany tamin’i Bodokely teo ampihinanana varisoa sy kitoza io maraina io. Notantarain’ilay zanany vavimatoa fa hividy Porche Cayenne vaovao na zavatra ohatr’izany hono ry Rabeza mianankavy.
“Izany ve?” Napetraky Rajao mihitsy ilay Revio Tsara Soratra nandramany novakiana.Ditodika nijery nivantanaan“Enjana kosa izany ilay Razokinibe raha mbola mahavidy fiara ihany amin’izao fotoana sarotra andalovan’ny firenena izao an! Ny olona rehetra anefa mikonaina fa sahirankirana daholo. Ny ahy, na ny vary eo an-doviako aza efa hanahirana.”
“Eny hoy aho! Ary tsy izay ihany anie fa tena irony fiara tsy mataho-dalana 4x4 ireny mihitsy hono ilay izy. Dedadedaka ery hono i Angele ilay zanany vavy nitantara tamin’i Bodokely ilay vavimatoako. Nampalahelo ahy ery ny nahita ilay vavikeliko nanontany hoe ‘rahoviana isika Papa no mba hividy 4x4 ohatra an‘ny Dadan’i Angele?’
“Eeeh! Misy olona dia mahita lalana foana e! Mety misy resaka vola mihodina any ambadika any fa isika no tsy maharaka,” hoy Rajao. “Ny ratsy anie tsy mba kely lalana e!” Dia nangina izy roalahy nieritrerira an-dRabeza sy fiarany.
Alarobia hariva tany ampiasana …. Efa vitavita ny asa ary efa kely sisa dia hirava ny mpiasa. Sendra nifanena teo an-dalatsaran’ny birao Rajao sy Ramose Sylvain ilay direkiterany.
“Tsy kely lalana mihitsy ny ratsy, Sefo an!” hoy Rajao.
“Marina mihtitsy izany,” hoy i Ramose Sylvain. “Inona no mahatonga an’ise hiteny izany?”
“Mijery antsika rehetra sahirankiran’ny fiainana aho, dia talanjona mahita an-dRabeza ilay mpivarotra enta-madinika ery Ampasanisadoda ….” Nijanona kely Rajao, tsy tapakevitra na hitantara na tsia. “Asa raha fantatrao izy.”
“Fantatro tsara ingahy Rabeza ka! Ilay ao amin’ny Epicerie Vatsisoa ve? Izy anie no nikarakara ny sakafo tamin’ny mariazin’i Andovola, ilay zanako mianatra any Montpellier. Tadidiko fa rangahy mahafinaritra izy. Na dia somary jokotsoriaka ihany aza indraindray. Fa maninona hono Rabeza any?”
“Izaho sefo fantatrao ihany fa tsy mba tia mifosa olona an! Fa tena gaga aho hoe mbola mahatakatra mividy fiara be toy ny Hummer ihany izy hatramin’izao.”
“Izany ve?” hoy i Ramose Sylvain. Talanjona ingahy Direketera. “Mahagaga tokoa izany an! Tsy efa amina-miliara ve ny vidin’ireny Hummer ireny?”
“Ohatry ny tsy mapino e? Kanefa dia resaka tena marina io. Source sure. I Angele ilay zanany mihitsy no nitantara tamin’i Bodokely ilay vavimatoan-dRakotobe ilay mpifanolobodirindrina aminay, dia izy no nitantara tamiko.”
“Hafahafa mihitsy! Isaky ny mandalo eo amin’ny epicerie-ny aho dia ohatry ny babangoana foana fa tsy misy olona mihitsy ao. Manana bizina any amin’ny sisiny angamba Rabeza iny matoa manambola hividanana Hummer izany.”
“Tena hafahafa tokoa an! Ny olona rehetra eto an-tanana toa mikolay … dia ileiry anefa migalabona sy mi-style anaty 4x4 Hummer … Izy aloha toa reko lazain’ny olona fa manana tany midadasika be any Avaratra Atsinanana any ka iza no mahita raha resaka andramena io na vatosoa.”
Alakamisy maraina teny Anosy…. Nila nanao taratasim-panjakana isankarazany teny amin’ny Ministeran’ny Atitany Ramatoa Seraphine vadin’i Ramose Sylvain, direkteran-dRajao, ilay mpifanolobodirindria amin-dRakotobe, ilay rain’i Bodokely, ilay BFF an’i Angele zanaka vavin-dRabeza, tompon’ny Epicerie Vatsisoa ery Ampasanisadoda.
Teo am-piandrasana ny tompon-andraikitra nikarakara ny dosie dia tafaresaka izy sy Madame Vololomboahangy, vadin’ny Commissaire Prosper Rabory, Minisitra nandritry ny fitondrana tetezamita, dia avy lasa Senatera vetivety, talohan’ny niverenany ho Tale Jeneraly misahana ny Ady amin’ny Kolikoly sy ny Kaomberaka eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika sy ny Zandarimariam-pirenena. Nifankahalala sy nifankahala tokoa izy roa vavy ireo efa hatry ny ela be.
“Tenenoko zavatra tena mahagaga indry fa aza lazaina olona an!” Hoy Ramatoa Seraphine avy hatrany. Te hampiseho sy hitantara zavatra mahazendana amin’ilay ramatoa mafy izy. “Nahazo Hummer 4x4 vaovao anaky roa hono Rabeza ilay tompon’ilay Epicerie Vatsisoa ery Ampasanisadoda ery!”
“Marina hoe! Tsy possible izany. Fantatr’indry moa hoe ohatrinona ireny Hummer ireny? Sao dia mba tsaho fotsiny izany.”
“Tena marina io ka. Ny zanany vavy mihitsy no nitantara tamin’ny vadiko.”
“Ka sarotra inoana kosa aloha raha olona tompon’io epicerie kely io no lasa manana Hummer 4x4 anakitelo e! C’est pas à la portée de n’importe qui les Hummers an! Na ilay Hummer gris metalisé anahy iny aza anie efa saika tsy nety nividy mihitsy i Prosper. Nila nanaovako Offensive de Charme tsy hita velively isan’alina nandritry ny herinandro vao nanaiky i Baina. Siora aho fa misy zavatra tsy milamina ao ambadik’io Affaire Rabeza nolazaindry io.”
“Eny tokoa! Misy resaka mandeha aloha fa mety ho fanodikodinam-bola azo avy amin’ny bois de rose sy safira nandritry ny tetezamita no nampanakarena an-dRabeza tampoka teo.”
Tsy namaly i Madame Vololomboahangy, vadin’ny Commissaire Prosper Rabory. Tamin’izay koa moa no tafaverina ilay tompon-andraikitra nikarakara ny dossier-ny ka nila nandeha izy.
Zoma tamin’ny enina sy sasany maraina tao an-trano… Teo am-pihinanana sakafo maraina Ramose Rabeza sy Madame Violette vadiny. Nilamindamina sy mirantava ery izy mivady fa samy natory tsara ny alin’io. Efa tafaresaka tamin’ilay ramatoa nivarotra ilay 404 Bachée tiany ho vidiana Rabeza, ary nifanao fotoana teo amin’ilay toerana malalaka teo alohan’ny Epicerie Vatsisoa ry zareo amin’ny folo sy fahefany. Samy tsindrindaona be ihany izy mivady.”
“Jereo tsara ny transmission sy ny carburateur an!” hoy Madame Violette tamin’ny vadiny. “Ireny mantsy matetika no simba voalohany amin’ny fiara Peugeot.”
“Ary toa lasa mecanicien tampoka ny vady malalako,” hoy Rabeza nananihany. “Sa mecanicienne moa izany?”
“Aza hihomehezana kosa an!” Mody sendaotra Ramatoa, kanefa nitsiky ihany. “Mba nanontany olona re aho, sady nijerijery tamin’ny anterineto koa e! Fa ny vilbrequin sy ny chemise piston …”
Tapaka ny teniny fa nisy nandondona mafy tampoka teny amin’ny vavahadiny.
“Tsy mahay mampiasa sonnerie koa ve izany olona izany? Iza koa izay manakotaba tanana amin’ny enina maraina? Mba jereo kely haingana hoe izany ao ambavahady izany, ry Gervais,” hoy izy naniraka ilay tovolahy sady mpahandro hanina no mpiandry tanana.
Tsy ela dia niverina i Gervais. Torakovitra ilay tovolahy.
“Misy miaramila na zandary be dia be ao ivelany Ramose an! Miandry anao hono ry zareo fa mila manaraka azy izao dia izao ianao …” hoy izy sady nanolotra an-dRabeza valopy misy tombokasem-panjakana.
Noraisin-dRabeza ilay taratasy … avy any amin’izany Commissaire Prosper Rabory izany miantso an-dRabeza ho tonga eny Fiadanana fa mila atao famotorana mikasika ny resaka fanondranana andramena (bois de rose) antsokosoko sy ny fangoronan-karena tsy ara-dalana.
“Oaray leaza …” hoy Ramose Rabeza gaga sy talanjona. “Inona ary ity …”
“Fa misy inona Rabeza an!” hoy Madame Violette nanomboka nikorapaka.
Zoma, herinadro taty aoriana …Hafaliana tsy omby tratra ny an’i Madame Violette. Tafaverina soa aman-tsara tao antranony teny Ampasanisadoda Ingahy Rabeza. Nifamihina mafy izy mivady, niaraka tamin’ny ankizy. Henjakenjana ny famotorana nataon’ny manampahefana taminy ka somary nikitringa kely izy niverina avy tany. Na dia tsy nisy porofo hoe nanao asa ratsy aza izy dia tsy ninoan’ny mpanao anterivava mihitsy.
Soa ihany fa nahalala an'i Madame Vololomboahangy vadin’ilay Commissaire Rabory, ilay nitarika ny famotorana Ramatoa Seraphine, ilay vadin-dRamose Sylvain, ilay direkitera an-dRajao, ilay mpifanolobodirindrina amin’ingahy Rakobe, ilay rain’i Bodokely, ilay mpiara-mianatra amin’i Angele, zanaka vavimatoan-dRabeza mivady. Ka dia izy no mba niangavian’i Maitre Theophile Ranjato, ilay mpisolovava nokaramain’izy mivady hiaro an-dRabeza. Dia mba vetivety, tsy nihoatra ny herinandro akory, dia mba niravina ny resaka ka afaka nandeha nody nadiodio ny anao lahy.
Soa ihany koa fa tsy dia tena lafo loatra ny vola nivoaka ny paosin’izy mivady, nandoavana ny karaman’ny mpisolovava, ny saran’ny hajiam-panjakana isankarazany, ny saran’ny fanontana ny dossie sy ny formilera rehetra nilaina … Rehefa natao ny kajikajy tsotsotra dia hitany fa nitovy saika tsy nisy valaka tamin’ny vidin’ny 404 baché anakiray ny totalin’ny vola lanin'izy mivady.
“Soa ihany fa tsy nila nitrosa isika namoahana anahy avy tao, Ramatoa an!” hoy ny bitsik’Ingahy Rabeza tamin’i Madame Violette vadiny tamin’izy nivady nifamihina. Sady nitsiky izy. "Soa ihany fa nanantombo ny varotra tamin'iny taona vao niherina iny..."